डीएनए परिक्षणका लागि रगतको नमुना दिएको भन्दै यज्ञराजले निर्मलाकी आमालाई कुटे - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बिहिबार, पुष २६, २०७५१८:३१ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
कञ्चनपुर । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिक निर्मला पन्तको अहिले पारिवारमै विवाद सुरु भएको छ । पन्तकी आमा लाई उनका बुवा यज्ञराजले कुटपिट गरेका छन् । घटनामा संकलन गरिएको डीएनए निर्मलाकै हो अथवा हैन् ? यकिन गर्नु पर्ने आवाज उठे पछि आमाबुवाको रगतको नमुना संकलनमा विवाद भएको हो ।
दुर्गा देवीले रगतको नमुना दिदा यज्ञ राजले दिएनन् उल्टै किन रगतको नमुना दिएको भन्दै श्रीमती माथि कुटपिट गरेका छन् । “यज्ञराजले बिहिवार किन रगतको नमुना दिएको भन्दै खाना बनाइरहेको बेलामा एक्कासी आएर कुटपिट गरेको ” दुर्गादेविले पन्तले पब्लिक आवाजसंग कुरा गर्दै भनिन् ।
कुटपिट गर्न थालेपछि आफु बाहिर आएको उनले बताईन् । उनका अनुसार अरुको इसारामा चल्ने भन्दै दुर्गाका कपाल तानतुन गरेर गाली गर्दै कुटपिट गरेका थिए । निर्मलाका बाबु यज्ञराज र कान्छी आमा लक्ष्मीले घरपरिवारसंग सल्लाह नै नगरि अरुले उस्काएको भरमा रगत दिएको र राहत बुझ्न राजी भएको आरोप लगाएका छन् । तर, निर्मलाकी आमा दुर्गाले न्यायको लागि पर्खिदा पर्खिदा दुई छोरीमाथी पनि अन्याय हुने भएकाले राहत बुझेर छोरीको भविष्य बनाउने भन्दै राहत बुझ्न तयार भएको बताएकी छन् । राहत बुझेपछि न्याय प्रभावित हुने बुवा यज्ञराज र कान्छी आमा लक्ष्मीको तर्क छ । उता, निर्मलाकी आमाले भने राहत बुझेर छोरीको भविष्य बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छिन् ।
अनामनगरबाट विप्लबका विद्यार्थी नेता पक्राउ !
खुखुरा चल्ला सहित सिरहा बाट मानिस पक्राउ
पचली भैरवको मूर्तिलाई बसन्तपुरमा यसरी गराइयो परिक्रमा (फोटो फिचर)